भानुप्रतापको अस्ट्रेलियामा छायाँकन गरेको हिन्दि गीत सार्बजनिक (भिडियो) | Celebrity Nepal
भानुप्रतापको अस्ट्रेलियामा छायाँकन गरेको हिन्दि गीत सार्बजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ: नेपाली यु–ट्युब च्यानलबाट एउटा हिन्दी गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘क्या क्या’ बोलको उक्त हिन्दी गीतको भिडियो मेकिङमा पनि बलिउड शैलीकै छ । अष्ट्रेलियामा छायांकन गरिएको उक्त भिडियोमा पुकार गौतम, रोजी पन्त, दिपा श्रेष्ठ, सन्दिपलाई फिचर्ड गरिएको छ ।
सार्बजनिक भिडियोलाई कलाकार भानुप्रतापले निर्माण गरेका हुन् । नेपाली चलचित्रमा खलनायकका रुपमा चिनिएका भानुप्रताप केही समययता नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट हराएका थिए । उनको खोजी भइरहेकै बेला उनले अष्ट्रेलियाबाट हिन्दी गीत ‘क्या क्या’को भिडियो प्रस्तुत गरेका हुन् । उनी केही समययता अष्ट्रेलियामा छन् ।
एमसन इन्टरटेनमेन्ट तथा अरबिट अस्ट्रेलिया ग्रुपको संयुक्त प्रस्तुतीमा रहेको उक्त भिडियोमा भानुप्रतापसँगै अमर रसाइलीको पनि निर्माण रहेको छ । मनोज अधिकारीको निर्देशनमा बनेको यस भिडियोलाई फिल्मीशैलीमा छायाँकन गरिएको छ । प्रभात यादवले गानएको यो ‘क्या क्या’ गीतको संगीत अञ्जान श्रेष्ठले गरेका हुन् । भिडियोमा राह शर्माको सिनेमाटोग्राफी तारिफयोग्य छ । यस भिडियोका लागि मेकिङ कन्सेप्ट पनि भानुप्रतापले गरेका हुन् ।
यो तीज गीत पनि हेर्नुहोस
खुमन र सपनाको तीज गीत: ‘घरबार गर्ने सोँच’मा रेजिना, रेखा र लोमशको छमछमी (भिडियो)
५० लाखको पुरस्कार सहित कमेडी च्याम्पिएन
‘लिङ्गे पिङ’ मा रवि ओड संगै ट्वीन्स दीपा र...
पवित्राको ‘दिलको चोट’ मा श्रेया र केवल...
तारा प्रकाश र कविताको गीतमा अभिनेत्री शिल्पा र सुरज...
अघोर बाबाको अफिसियल गीत ‘बम बम भोले’...
निशान र मेलिनाको गीतमा अर्जुन र वर्षाको अभिनय (भिडियो)
उत्तम उपाध्याय र सुनिताको स्वरमा दुर्गा भजन सार्बजनिक...
निश्चल बने ‘घामड शेरे’ ! यस्तो छ ट्रेलर (भिडियो)
प्रदर्शनमा ‘छ माया छपक्कै’
‘वार’ ले सात दिनमै कमायो २ सय करोड
‘यात्रा’ पछि सलिनमानको चलचित्र यात्रा किन रोकियो ?
प्रभासको सफलताको कारण खुलाईन् उनकी आमाले
टोनी कक्करले काठमाण्डौका दर्शकलाइ नचाउने
‘बादशाह जुट’ र मुस्लिम समुदाय बीचको विवाद टुंगियो
साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार टोकारजुक र हान्डकेलाई